एन आई सी एशिया बैंकले गर्यो पाँच लाखको बिमा दाबी भुक्तानी
Friday, 11 Jan, 2019 11:27 AM
२७ पुस, काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंकले “प्रिमियम समुन्नती बचत खाता” खोलेका बैंकका ग्राहकका परिवारलाई दुर्घटना बिमा रकम प्रदान गरेको छ । बैंकले अत्यन्त लोकप्रिय रहेकोे बचत निक्षेप योजना “प्रिमियम समुन्नती बचत खाता” खालेका ग्राहक स्वर्गीय राज कृष्ण श्रेष्ठको परिवारलाई सो रकम प्रदान गरेको हो ।
श्रेष्ठको कार्तिक २० गते दुर्घटनामा परि मृत्यू भएको थियो । “प्रिमियम समुन्नती बचत खाता” खोल्दा रु. ५ लाख बराबरको स्वतःं दुर्घटना बिमा हुने भएकोले सो बिमाको क्षतिपुर्ति बापत रकम स्वर्गीय श्रेष्ठका हकवाला उनका छोरा रजत कृष्ण श्रेष्ठलाई एक कार्यक्रमका बिच हस्तानतरण गरेको छ ।
चेक बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत सन्तोष कुमार राठीले पौष २६ गतेका बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा हस्तानतरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा राठीले बैंकको निक्षेप योजनाको क्षतिपुर्ति रकमले खातावालको परिवारको चोटमा सानो भएपनि मलम लगाउन पाएकोमा आफु भावबिव्हल भएको जनाएका छन् ।
बैंकले आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गर्दै शाखा २ सय ७० पुर्याएको छ। बैंकको एटिएम काउन्टर २ सय ८९ वटा रहेका छन् भने ३७ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर तथा २२ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा दिँदै आएको छ।
बैंकको वासलातको आकार रू। २ सय १५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने कुल निक्षेप करिब रू. १ सय ६९ अर्ब तथा कर्जा रू. १ सय ४६ अर्ब पुगिसकेको छ । हालसम्म ग्राहक संख्या करिब १४ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ ।